VaTsvangirai Vanodomwa Kutungamira Mubatanidzwa weMDC Alliance
Mamwe masangano akazvimirira anoti ari kutsigirawo mubatanidzwa uyu
Mutungamiri weMDCT, VaMorgan Tsvangirai vakabatana nevatungamiri vemamwe mapato anopikisa kuti vakwikwidze musarudzo dzegore rinouya vakabatana vachiti yakwana nguva yekuti vayambutse ruzhinji rweZimbabwe kubva munyatwa marwuri.
VaTsvangirai vakasainirana chibvumirano chemushandirapamwe neMDC inotungamirirwa naVaWelshman Ncube, People’s Democratic Party inotungamirirwa naVaTendai Biti, Transform Zimbabwe inotungamirwa naVaJacob Ngarivhume, bato reMultiracial Christian Democrats, MCD rinotungamirwa naVaMathias Guchutu, bato reZimbabwe People First rinotungamirwa naVaAgrippa Mutambara pamwe neZanu Ndonga.
Mapato aya akasarudza VaTsvangirai kuti vave ivo vachakwikwidzana naVaRobert Mugabe vakamirira mubatanidzwa uri kudaidzwa kuti MDC Alliance uyu.
Vachitaura pamusangano uyu, uyo wakapindwa nezviuru zvevatsigiri vebato iri pamwe nevatsigiri vemamwe mapato aya wakaitirwa muZimbabwe Grounds mumusha weHighfield, VaTsvangirai vakati kubatana kwavakaita nemamwe mapato kunovapa mukana wakakura wekukunda musarudzo sezvo vachiti chara chimwe hachitswanye inda.
Vakaenderera mberi vachiti kuumbwa kwemubatanidzwa uyu hakusi kwekupanana zvigaro chete asi kuti vaedze kupedza matambudziko akatarisana neveruzhinji munyika.
VaTsvangirai vakati, "Zivai kuti chigaro iyoyo, ndeye vana weZimbabwe, kwete yako. Handiti murikuzvinzwa? Ndirikuda kuti tivize mweya. Sometimes satan anongo uyawo, woona wekupinda napo. eh, isusu kuno takazo dhai. Ndotoseka zvangu kuti haa, vatsva vetsambo. Muroyi kuhukurwa nembwa musi waanotanga kunoroya. Ko objective yatinayo inobatsira kubatsira munhu vese. Hausi kuiyona?
VaMutambara vakatiwo vanoziva chikiribidi chese chaiitwa neZanu PF musarudzo dzapfuura zvekuti Zanu PF haina mukana wekukunda musarudzo.
VaNcube vakatiwo kubatana kwavakaita kwavapa mukana wekudzokera kunopedzisa basa ravakavamba naVaTsvangirai muna 1999 pakaumbwa MDC. Vakatora mukana uyu kukumbira ruregerero kuruzhinji rweZimbabwe nekumbopatsanurana kwavakaita naVaTsvangirai.
"Takabvumirana on the five priority issues kuWomen's Bureau in 1999. We are going back to those same five priorities - leadership yeZCTU, yakati they'll write the manifesto for us. But manifesto yacho takainyora in 1999.
"Zvakaitika is that we diverted from that agenda for change. We made mistakes along the way and we must admit before you today, and say we are sorry for those mistakes." (Takabvumirana muna1999 kuWomen's Bureau pamusoro pezvinhu zvishanu zvakakosha. Tiri kudzokorera kune izvo zvishanu zvinokoshapezhinhu izhozho. Hutungamiri hweZCTU vakati vachanyora manifesto kwatiri. Asi manifesto yacho takainyora mugore re1999. Zvakaitika ndechekuti isu takatsauka kubva pane zvinangwa zvekuchinja. Takaita zvikanganiso munzira, uye zvino tinofanira kubvuma izvo zvikanganiso, uye tichiti tine urumbo.") Chinja maitiro, maitoro chinja!"
Zvichakadai, VaBiti vakati hupfumi hwenyika hwaenda kumawere zvekuti zvavekutoda zvekuita gariraneko tisangane kuti ruzhinji rweZimbabwe rwuwane pundutso.
VaNgarivhume vakatiwo rwendo rwuno havasi kuzopa Zanu PF mukana wekubirira musarudzo vachiti vachagara panzvimbo dzose dzinenge dzavhoterwa kudzamara zvinenge zvabuda musarudzo zvaziviswa.
VaTsvangirai vakatiwo mamwe mapato asina kupinda muchibvumirano icho achine mukana wekuita izvi pamberi pesarudzo.
Vakafanobata chigaro chemunyori mubato reNational People’s Party riri kufanotungamirirwa naAmai Joice Mujuru, VaGift Nyandoro vanoti havana kuenda kuchiitiko ichi sezvo vachiti vakanga vasina kukokwa. VaNyandoro vanoti zvisinei, bato ravo richaramba richiita nhaurirano neMDC T dzekuumba mubatanidzwa wakasimba pamberi pesarudzo.
Zvichakadaro, mumwe mugari wemuHarare, Muzvare Clarence Mabika vanoti mapato ese asina kupinda mumubatanidzwa weMDC Alliance anofanira kuti abatane naVaTsvangirai nevamwe vavo kwete kuita chinya chegurwe.
"Tinoda kutimapato ayanopikisana aya, abatane, kuitira kuti vakundewo Mugabe pamaelections arikurera aya, because zhanyanya man, izvizvirikuitika. Isusu tirikuda kuti nyika yedu ibudirire ienderere mberi."
Mapato akaumba mubatanidzwa weMDC Alliance aya anoti kwasara kuti vagare pasi vogadzira hwaro hwekuti votsvaga sei rutsigiro pamwe nenhengo dzichakwikwidza dzakamirira mubatanidzwa uyu.